रङ्गभूमिमा – Word of Truth, Nepal
मानिसहरूले आज मनोरञ्‍जनको निम्ति धेरै कुराहरू गर्छन्। फुटबल, क्रिकेट र अन्य खेलकुदहरू हेर्न भीडका भीड मानिसहरू जान्छन्। केही मानिसहरू प्रत्यक्ष गायन कार्यक्रमहरूमा वा फिल्म हलहरूमा जान्छन्। केही मानिसहरू आफ्नै घरमा बसेर टिभी हेर्दै आफ्नै वैठक कोठाहरूलाई “घरेलु मनोरञ्‍जन” को स्थान बनाउँदै रमाइलो गर्छन्। थुप्रै मानिसहरूमा रमाइलो गर्ने, मनोरञ्‍जन गर्ने, भरपूर आनन्द लिने र मोजमज्जा गर्ने विषयमा कहिल्यै नअघाउने भोक हुन्छ। यस्तो भोक जुन कहिल्यै तृप्त हुँदैन तर बरू अझ धेरैको चाहना हुँदछ।
रमाइलो गर्नु वा मनोरञ्‍जन गर्नु आफैंमा पापपूर्ण होइन। डाँडामाथि चढेर सुर्योदय हेर्नु वा नदीको किनारमा घुम्न गएर सुर्यास्त हेर्दै रमाइलो गर्नुमा केही नराम्रो छैन। समस्या तब आउँछ जब हामी मोजमज्जालाई हाम्रो जीवनको ठूलो हिस्सा बन्न दिन्छौं र तीद्वारा वास्तविक महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ओझेलमा पार्न दिन्छौं। यो समस्या २ तिमोथी ३:४ मा उल्लेखित छ, “(अन्तिम दिनहरूमा) परमेश्वरलाई भन्दा बरू ________________________ प्रेम गर्ने” हुनेछन्। उनीहरूले आफ्नो समय र शक्ति थोरै समयको मोजमज्जाको पछि लाग्नमा खर्च गर्नेछन् (हिब्रू ११:२५) र सदा-सर्वदा रहिरहने सुख-चैनहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नेछन् (भजनसङ्ग्रह १६:११)।
प्राचीन समयका रोमीहरू मोजमज्जालाई प्रेम गर्ने र मोजमज्जाको पछि लाग्ने मानिसहरू थिए। उनीहरूको बीचमा मनोरञ्‍जन गर्न र रमाइलो गर्नको निम्ति जाने ठाउँहरू थियो। कलाकारहरूले नाटक खेलेको हेर्न थुप्रै मानिसहरू रङ्गमञ्‍चमा जाने गर्थे। त्यस्ता ठाउँहरूमा प्राय: जसो सांसारिक सङ्गितहरू बजाइन्थ्यो र कामुक नृत्यहरू देखाइन्थ्यो (यौन उत्तेजना बढाउने हेतुले स्त्रीहरू नाच्थे)। घोँडा र रथहरूको दौड प्रतियोगिता, जङ्गली पशुको शिकार र अन्य होडबाजीमुलक खेलहरू आयोजना हुने कार्यक्रमहरू (अर्थात्, सर्कस) हेर्न थुप्रै मानिसहरू जाने गर्थे। तर रोमीहरूका निम्ति ती सबैलाई पनि माथ गर्ने प्रख्यात मनोरञ्‍जनको केन्द्र थियो ग्ल्याडिएटर प्रतियोगिता (हतियारहरू लिएर एक-अर्कासँग लड्ने मल्ल योद्धाहरूको प्रतियोगिता)।
ग्ल्याडिएटर भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले सर्वसाधारणहरूको मनोरञ्‍जनको निम्ति मृत्युसम्म पनि कुस्ती लड्नुपर्थ्यो। यो शब्द ग्ल्याडियस भनिने लाटिन शब्दबाट आएको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ “तरवार”। थुप्रै ग्ल्याडिएटरहरूले आफ्नो सुरक्षाको मूल हतियारको रूपमा तरवार प्रयोग गर्दथे। ती मानिसहरू अर्को व्यक्तिलाई मार्नकै निम्ति कुस्ती लड्थे। आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई आफूले मार्न नसके उसले आफूलाई नै मार्नेछ भनी उनीहरूलाई थाह हुन्थ्यो। आज व्यवसायिक कुस्तीवाजले हार व्यहोरे पनि लाखौं रुपैंया कमाएर फर्किन सक्छ। कति पटक कुस्तीमा हारे पनि त्यसरी ऊ विजेता झैं हुन सक्छ। तर ग्ल्याडिएटरहरूको सवालमा भने त्यस्तो हुँदैनथ्यो। आफूहरूले जसरी पनि जित्नै पर्छ भनी उनीहरूलाई थाह हुन्थ्यो। उनीहरूको निम्ति हार्नु भनेको मृत्यु हुन्थ्यो! ग्ल्याडिएटरहरूको युद्ध जीवन लामो हुँदैनथ्यो। रोमी मानिसहरू रक्तपात र मृत्यु हेर्न आउँथे र उनीहरूलाई त्यही नै देखाइन्थ्यो।रक्तपात र हत्या हेर्न रुचाउने मानिसहरूको बारेमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? आफैंजस्तो अर्को मानिसलाई आक्रमण गरिएको, उसलाई जितिएको र उसको हत्या गरिएको हेर्न उत्सुक हुने र रोमांचक महसुस गर्ने मानिसहरूको बारेमा तपाईं के सोच्नुहुन्छ? मानिसको दुष्ट र छली हृदयको बारेमा यसले हामीलाई के सिकाउँछ (तुलना गर्नुहोस् रोमी ३:१५-१७)? के आधुनिक नेपालीहरूले अन्य मानिसहरू काटिएको र हत्या गरिएको हेरेर मनोरञ्‍जन लिन्छन् होला? (यस प्रश्नको बारेमा थप कुराहरू हामी पछि मनन गर्नेछौं)।
एम्फीथिएटर भनेको अण्डाकार वा गोलाकार रङ्गशाला हो जहाँ बीचको खुला जमीनको वरिपरि खुड्किला-खुड्किला गरी मिलाएर बनाइएका बस्ने ठाउँहरू हुन्थे। प्राचीन एम्फीथिएटरहरू धेरै हिसाबमा आधुनिक फुटबल रङ्गशालाहरू जस्तै थिए। एम्फी शब्दको अर्थ हो “दुवै तर्फ”। रङ्गमञ्‍चमा प्राय: जसो दर्शकहरू एकातिर बस्ने गर्छन्। एम्फीथिएटरमाचाहिँ दर्शकहरू दुवै तर्फ (वा वरिपरि) बस्छन्।
रङ्गभूमि भनेको एम्फीथिएटरको एउटा खुल्ला अखाड़ा थियो जहाँ ग्ल्याडिएटरहरूलाई युद्धहरू गराइन्थ्यो। रोमी जगतको सबै भन्दा प्रख्यात एम्फीथिएटर रोम अवस्थित कलस्सीयम थियो (यो अति अचम्मको संरचना थियो जसको भग्नावशेषहरू आज पनि देख्न सकिन्छ)। यो संरचनाको उद्‍घाटन ई.सं. ८० मा गरिएको थियो र यसमा ४५,००० दर्शकहरू अटाउँथे। यसलाई प्राय: जसो ग्ल्याडिएटर कुस्तीहरूको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो तर यसभित्र पानी जमाएर समुद्री जहाजहरूको युद्ध अभ्यास पनि गर्न सकिन्थ्यो!
रोम अवस्थित उक्त कलस्सीयम एकमात्र एम्फीथिएटर भने थिएन। ब्रिटेनदेखि लिएर सिरियासम्म रोमी सम्राज्यको हरेक प्रमुख शहरहरूमा एम्फीथिएटरहरू थिए। एउटै अपवाद भनेको ग्रीसका शहरहरू थिए किनभने यस्ता निर्मम र क्रूर प्रतियोगिताहरू ग्रीक मानिसहरूको बीचमा कहिल्यै पनि सर्व-स्वीकार्योग्य भएनन्। तर इटाली, गउल, उत्तर अफ्रीका र स्पेनमा एम्फीथिएटरहरू निकै प्रख्यात थिए र हरेक ठूलो शहरमा ती भेट्टाइन्थे।
कोही स्वयंसेवक हुनुहुन्छ की?
हरेक वर्ष रोमी एम्फीथिएटरहरूमा लाखौंको संख्यामा मानिसहरू मर्थे। रोमीहरूले यी सबै ग्ल्याडिएटरहरूलाई कहाँ भेट्टाउँथे? कुनै पनि मानिसले यस्तो जागिर वा पेशाको निम्ति उत्कट चाहना गर्दै आवेदन त अवश्य पनि दिँदैनन्!
ग्ल्याडिएटरहरू कहाँबाट आउँथे? यसको पाँच ओटा जवाफहरू छन्:
१. युद्धमा बन्धक बनाइएकाहरू अकसर त्यस अखाडामा फ्याँकिन्थे। युद्धभूमिमा रोमीहरू विजयी भएको खण्डमा सिपाहीहरूले युद्धबाट कैदीहरूलाई लिएर आउँथे र ती कैदीहरू भीडको मनोरञ्‍जनको निम्ति ग्ल्याडिएटरहरूको रूपमा कुस्ती लड्थे। संसारको विभिन्न भागहरूबाट ल्याइएका विभिन्न मानिसहरू विभिन्न हतियारहरू (विभिन्न किसिमका तरवारहरू र कवचहरू इत्यादी) प्रयोग गरेर विभिन्न शैलीहरूमा कुस्ती लड्थे, र प्रतियोगिताहरूमा यसले विविधता ल्याउँथ्यो।
२. दासहरूलाई पनि अकसर ग्ल्याडिएटरहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। रोमी सम्राज्यमा लगभग आधा जनसङ्ख्या बराबर दासहरू थिए। रोमी जगतमा दासहरूलाई मानिसहरूका रूपमा होइन तर सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। यी मानिसहरूलाई केवल एउटा सम्पत्तिको रूपमा मात्र हेरिएको हुनाले, मालिकहरूले दासहरू प्रति आफूलाई जस्तो मर्जी लाग्यो त्यस्तै गर्दथे। अखाडामा उनीहरूलाई एक-अर्कासँग कुस्ती लडाउन के गलत भयो र? मालिकहरूले दासहरूलाई अकसर ग्ल्याडिएटर हुनलाई बेचिदिन्थे। त्यो मुनाफामुलक व्यापार थियो।
३. अपराधीहरूलाई अकसर त्यस रक्ताम्मे अखाडामा पठाइन्थ्यो। त्यो भनेको उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइए बराबर थियो किनभने ढिलो-चाँडो उनीहरूमध्ये थुप्रैजना मर्ने नै थिए।
४. सतावटमा परेका मानिसहरूलाई तरवार वा आगोका ज्वाला वा जङ्गली जनावरको दाँतहरूको सामना गर्न भनेर बलजफती अखाडामा लगिन्थ्यो। ख्रीष्टिय विश्वासीहरू र यहूदीहरूको सवालमा यही सत्य थियो। यसरी धेरै निर्दोष मानिसहरू मारिए। धेरै ख्रीष्टिय शहिदहरूले एम्फीथिएटरमा आफ्नो प्राण अर्पण गरेका छन्।
५. कोही-कोहीले स्वेच्छापूर्वक ग्ल्याडिएटरको रूपमा कुस्ती लड्थे! केही जवान मानिसहरूले आफ्नै रोजाइमा निश्चित समयको निम्ति ग्ल्याडिएटर हुन अघि बढ्थे र यसको निम्ति उनीहरूलाई ठूलो रकम तिरिन्थ्यो (यदि मारिएनन् भने)। ती पुरुषहरूले जीवित रहनको निम्ति उनीहरूको आफ्नै शक्तिबल (उनीहरूको साहस, सामर्थ्य र दक्षता) मा भर पर्थे। तसर्थ, उनीहरू “व्यवसायिक कुस्तीवाज” बन्थे र त्यसैबाट आफ्नो पेशा चलाउँथे। निश्चय पनि, हार्न बित्तिकै उनीहरूको पेशा सिद्धिन्थ्यो।
आज सेनामा वा प्रहरीमा भर्ना लिने उद्देश्यले भर्ना-केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। रोमीहरूको पनि ग्ल्याडिएटर भर्ना केन्द्रहरू थिए होला। के यस्तो जागिर खान तपाईंले निवेदन दिनुहुनेथियो? तलब राम्रै भए तापनि काम गर्ने सर्तहरू आफ्नो चाहना अनुसार हुने थिएन र पेन्सन योजना पनि यस संसारभन्दा बाहिरै हुने थियो (सायद स्वर्ग वा नरक)।
ग्ल्याडिएटर युद्धको भयावह इतिहास
दासहरूलाई उनीहरूको ज्यान बचाउनुपर्ने किसिमको कुस्ती लडाउनु एट्रुस्कान खेलकुद (Etruscan sport) थियो। (एट्रुरीया मध्य इटालीको एक प्राचीन देश थियो)। रोमीहरूले यो भयावह खेलकुदलाई तेस्रो शताब्दितामा पुन: सुचारू गरे। ऐतिहासिक रूपमा पहिलो पटक उल्लेख गरिएको ग्ल्याडिएटर कुस्ती २६४ ई. पू. मा रोमको एउटा मञ्‍चमा यो खेलाइएको थियो। यसमा केवल तीन जोडी ग्ल्याडिएटरहरू सहभागी भएका थिए।
१७४ ई. पू. मा तीतस फ्लामीनिनसको आयोजनामा ७४ जना ग्ल्याडिएटरहरूले तीन दिने कुस्ती लडेका थिए। धेरै समय नबित्दै सयौं संख्यामा ग्ल्याडिएटरहरू यस्तो कुस्ती लड्न थाले। भीडहरूले केवल थोरै मानिसहरू मात्र एक-अर्कासँग लडिरहेको हेर्नमा सन्तुष्ट भएनन्। उनीहरू पूरै रङ्गभूमि मानिसहरूले भरिएको हेर्न चाहन्थे र को-को बाँच्छन् भनी अनुमान गर्न रुचाउँथे। उनीहरूले वास्तवमा आफ्नै युद्ध (लडाईं) को ढाँचा बनाइरहेका थिए र त्यहाँ बसेर ती लडाईंहरू हेर्थे। भौतिक युद्ध आफैंमा नै खराब हुन्छ। किन मानिसहरू युद्धलाई खेलकुदको रूपमा ढाल्छन्? किन मानिसहरू हिंसा हेरेर मनोरञ्‍जन गर्न रूचाउँछन्?
ई. पू. १०० ताका जुलियस सिजरले ३०० भन्दा बढी ग्ल्याडिएटर जोडीहरूको लडाईं प्रदर्शन गरे। सम्राट तीतसले १०० दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनको आदेश दिएका थिए। ९० एडीमा सम्राट डोमिटियनले पुड्काहरू र महिलाहरूको बीचमा लडाईं गराएर उक्त खेललाई अझ अमर्यादित तुल्याए। सम्राट ट्राजनले ५,००० जोडा ग्ल्याडिएटरहरू सहभागी गराएर एउटा निकै ठूलो प्रदर्शनको आयोजना गरे।
एउटा रोमी सम्राट त आफैं सहभागी पनि भएका थिए। सम्राट कम्मूडस (दोस्रो शताब्दिको अन्त्यतिर) हर्क्यूलिसको पात्र निर्वाह गर्दै डण्डा र सिंहको छालासहित मञ्‍चमा कम्तीमा पनि ७३५ पटक उत्रिएका थिए, र तिनी (आफूलाई चोट नलागोस् भन्ने निश्चित हुन) एउटा सुरक्षित स्थानबाट युद्ध लड्दथे र त्यसरी तिनले असङ्ख्य पशु र मानिसहरूलाई मारे।
जङ्गली पशुहरूको पनि अकसर संहार गरिन्थ्यो। भीडहरूले मानिसहरू मारिएका हेर्न रूचाउँथे र पशुहरू मारिएका हेर्न रुचाउँथे। उनीहरू रगत बगिरहेको हेर्न रूचाउँथे, चाहे त्यो मानिसहरूबाट होस् वा चाहे पशुहरूबाट। उदाहरणको रूपमा भनौं, उनीहरू हात्तीलाई निर्ममता पूर्वक मारेको हेर्न रूचाउँथे।
फ्लाभियन एम्फीथिएटर (रङ्गशाला) को उद्‍घाटनमा, एकै दिनमा पाँच देखि नौ हजार जङ्गली पशुहरू (विभिन्न विवरणहरू अनुसार) मारिएका थिए। प्रोबसको नेतृत्वमा (२८१ एडी) एकै दिनमा करिब एक सय भाले सिंहहरू, एक सय पोथी सिंहहरू, २०० चितुवाहरू, ३०० भालुहरू र १००० जङ्गली बँदेलहरूको संहार गरिएको थियो। के यस्तो कार्यक्रम हेर्न तपाईंले रकम तिर्नुहुने थियो? के यस्तो कुरा तपाईंलाई मनोरञ्‍जनात्मक वा रमाइलो लाग्थ्यो?
रोमी सर्वसाधारणहरू यस्तो रक्ताम्मे खेलहरू रूचाउँथे। मानिसहरूको माझमा ती निकै प्रख्यात थिए। निकै कम रोमी शासकहरूले मात्र यसको विरोधमा आवाज उठाएका थिए।
ग्ल्याडिएटर प्रतियोगिताहरूको अन्त्य
धन्न यी खेलहरू ६०० वर्षसम्म मात्र चल्यो। कन्स्टान्टीनले धरी (जसको बारेमा हामी आगामी पाठहरूमा सिक्नेछौं) करिब ३१३ ए.डी. को अन्त्यतिर मानिसहरूको मनोरञ्‍जनका निम्ति युद्धमा पराजित भएका ठूलो सङ्ख्याका बार्बेरियनहरूलाई जङ्गली पशुहरूकहाँ सुम्पिदिएका थिए। तर पछि, ३२५ ए.डी. मा कन्स्टान्टीनले यस्तो रक्ताम्मे तमाशाहरूको पहिलो निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए।
किन यस प्रकारका रक्ताम्मे प्रतियोगिताहरू विलय भएर बन्द भए? येशू ख्रीष्टको मण्डली नै ग्ल्याडिएटर खेलहरू अन्त हुनुको पछाडी पहिलो कारण थियो। विश्वासीहरूको प्रभावको कारणले र यस्ता प्रतियोगिताहरूको विपरति उनीहरूको कडा विरोधको कारणले, ग्ल्याडिएटर प्रतियोगिताहरू संसारबाट विलय भएर गए। यसको वर्तमान अपवाद भनेको स्पेन र दक्षीण अमेरिकी राष्ट्रहरू हुन् जहाँ आज पनि पशुहरूको संहार गरेर मानिसहरूको मनोरञ्‍जन गराइन्छ। जसलाई बुलफाइट (गोरू जुधाई) भनिन्छ।
धेरै ग्ल्याडिएटरहरूलाई पाठशालाहरूमा तालिम दिइन्थ्यो र जो यस काममा सफल हुन्थे, उनीहरूले केही रकम पनि कमाउँथे। ग्ल्याडिएटरहरूको मालिकहरूले र एम्फीथिएटर (वा रङ्गभूमि) चलाउने मानिसहरूले निकै मोटो फाइदा कमाउँथे! यो निकै फाइदाजनक व्यापार थियो। के आजको खेलहरू पनि यस्तै फाइदा मुलक हुन्छन्?
ग्ल्याडिएटरहरूको जीवन सजिलो जीवन थिएन। ती बाँच्ने अल्पसङ्ख्यामा पर्न सकिएन भने छिट्टै मृत्युको मुखमा हुने निश्‍चित छ भनी ती मानिसहरू जान्दथे। उनीहरूले आत्महत्या गर्ने पनि कोसिस गर्दथे। सफल हुनेहरूचाहिँ निकै प्रख्यात पनि हुन्थे। सफल ग्ल्याडिएटरहरूले आजका कुस्तीवाज वा खेलाडीहरूले कमाएको भन्दा पनि बढी नाम कमाउँथे भनेर भन्ने गरिन्छ। उनीहरूको निकै ठूलो ख्याती थियो।
प्रतियोगिताहरूकै बारेमा विचार गरौं
प्रतियोगिताहरूको बारेमा केही दिन अगावै जानकारी गराइन्थ्यो। उक्त सुचना घरहरू र सार्वजनिक भवनहरूको भित्ताहरूमा टाँसिन्थ्यो। त्योचाहिँ विज्ञापन अभियान थियो। सबैले योद्धाहरूलाई राम्ररी हेर्न सकून् भनेर प्रतियोगिताको उत्सवलाई समारोहपूर्ण जुलुसद्वारा सुरू गरिन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ बनावटी कुस्ती हुन्थ्यो (देखावटी कुस्ती)। सायद योद्धाहरूलाई तताउनको निम्ति!
वास्तविक युद्धको सन्देश तुरहीहरू फुकेर घोषणा गरिन्थ्यो। युद्ध गर्न इन्कार गर्ने ग्ल्याडिएटरहरूलाई उनीहरूले जे सुकै बहाना बनाए पनि कोर्राहरू र तातो फलामहरूले लगाउँदै हिँडाइन्थ्यो। घाइते मानिसले आफ्नो चोर-औंला उठाएर दयाको निम्ति विन्ती गर्थ्यो। कि त दर्शकहरूले आफ्ना रूमालहरू हल्लाएर दयाको चिन्ह प्रदर्शन गर्थे वा मुठ्ठी कसेर बुढी औंला तलतिर फर्काएर मृत्युको निम्ति दोषी घोषणा गर्दथे। शरीरमा काटिएकाहरू र मरणाशील अवस्थामा पुगेकाहरूलाई घिसारेर एउटा निश्‍चित ठाउँ (स्पोलिआरियम) मा लगिन्थ्यो जहाँ उनीहरूको हात-हतियारहरू खोसिन्थ्यो, र नमरेकाहरूलाई मारिन्थ्यो।
वास्तविक दोषी को थियो?
अघि उल्लेख गरिएझैं, दर्शकहरूले बुढी औंला तलतिर फर्काएर मानिसलाई दोषी घोषणा गर्दथे। वास्तवमा ती दर्शकहरूले आफैंलाई दोषी ठहराइरहेका थिए। उनीहरूले सारा मानिसहरूका सामु आफू कति भ्रष्ट र दुष्ट छौं भन्ने प्रमाण दिइरहेका थिए। उनीहरूले हत्यालाई एउटा खेलकुद बनाइरहेका थिए। उनीहरूले आफ्नो निर्दयी उत्सुकता र रगतको प्यासलाई सन्तुष्ट गराउने हेतुले हजारौं मानिसहरू र पशुहरू नष्ट गरिएको र संहार गरिएको अति व्यग्र भएर हेर्थे। ती रोमीहरूको न्यायकर्ता भएर हेर्नुहोस्। उनीहरू निर्दोष छन् कि दोषी छन्? उनीहरू धर्मी छन् र भ्रष्ट? के एउटा इमानदार र निष्ठावान मानिसले ती असाह्य मानिसहरूतर्फ आफ्नो बुढी औंला घोप्टाउथ्यो होला र?
के वर्तमान नेपालीहरू दोषी छन्?
हाम्रो विषयमा चाहिँ के नी? सभ्य नेपालमा जिइरहेकाहरूको विषयमाचाहिँ के नी? के आज हामी कुनै फुटबल रङ्गशालामा गएर सिपाहीहरूले एकअर्कालाई गोली हानीरहेको र मारिरहेको हेर्छौं? अवश्य पनि हेर्दैनौं! तर केही कुराहरू बिचार गरौं।
के आज हामीले हत्या जस्तो कुराहरूलाई खेलकुद बनाएका छौं? के आज हत्याद्वारा मानिसहरूले मनोरञ्‍जन लिन्छन्? के आज हिंसाजनक कुराहरूमा मानिसहरू आनन्दित हुन्छन्? के रगत बगेको हेरेर मानिसहरू रमाइलो गर्छन्?
यो सत्य हो कि नेपालीहरू एम्फीथिएटरमा जाँदैनन्। तर, उनीहरू थिएटर (फिल्म हल) मा जान्छन्! अनि त्यहीँ नै उनीहरूले यस्तो हिंसात्मक कुराहरू हेर्छन् जुन कुराहरूले सायद प्राचीन रोमीहरूलाई समेत डर लाग्ने तुल्याउनेथियो! एउटा विशाल एम्फीथिएटरमा ४५,००० जना मानिसहरू मात्र आटाउन सकिन्थ्यो, तर हरेक हप्ता लाखौं नेपालीहरू सिनेमा हल जान्छन् वा घरमा बसेर चलचित्रहरू हेर्छन्। उनीहरूले इच्छा गरे भने रक्तपात, हत्या, हात वा कानहरू वा आँखाहरू काटिएका दृश्यहरू र निर्मम अनि क्रूर तरिकाहरूद्वारा मानिसहरूलाई मारिएका दृश्यहरूले भरिएका सिनेमाहरू हेर्न सक्छन्। अनि रोमीहरूले टाढाबाट त्यो क्रूरता हेर्नु पर्थ्यो, तर नेपालीहरूले ठूला-ठूला स्क्रीनमा एकदम नजिक बसेर सबै कुराहरू हेर्न सक्छन्। अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालीहरूले घरमै बसी-बसी चाहेको समयमा रक्तपातले पूर्ण चलचित्रहरू टेलिभिजन वा मोबाइलबाट हेर्न सक्छन्।
हो, त्यहाँ भिन्नता पनि छ। रोमीहरूले मानिसहरू र जनावरहरू वास्तविक रूपमा नै मारिएका र रगत बगाइएका हेर्दथे। चलचित्रहरूमा देखाइएका ती सब दृश्यहरू काल्पनिक हुन्। कलाकारहरू वास्तवमै मारिएका हुँदैनन् र उनीहरूलाई वास्तवमै रक्तपात गरिएको पनि हुँदैन। तरैपनि, ती सब कुराहरू साँच्चै भएझैं गरी देखाइएका हुन्छन्।
के विश्वासी जन त्यस्ता हिंसापूर्ण कुराहरू हेर्ने काममा सहभागी हुनुहुन्छ? कसैले प्रतिजवाफ देला: “तर रोमीहरूले देखेका हत्याहरू वास्तिवक थिए। हामीले हेर्ने गरेका हत्याहरू वास्तविक होइनन्। ती मानिसहरू केवल हलिउड वा बलिउड कलाकारहरू मात्र हुन्। त्यो हेर्नुमा नै के खराबी होला र?” के हाम्रो मनहरूलाई त्यस्तै प्रकारका कुराहरूले भर्नु ठिक हुन्छ? के यसको बारेमा फिलिप्पी ४:८ ले हामीलाई केही कुराहरू निर्देशन गर्छ? के हाम्रो मनहरूलाई भर्न सकिने त्यहाँ उत्तम कुराहरू छन्?
के हाम्रो मनहरूलाई भर्ने र आँखाहरूलाई खुवाउने त्यहाँ अझ उत्तम कुराहरू छन्?
के ख्रीष्टियन विश्वासीले रक्तपात र हत्याले भरिएका हिंसापूर्ण चलचित्रहरूको बिरुद्धमा बलियो अडान लिनुपर्छ? तपाईंका मित्रहरूले (मानौं अति मनोरञ्‍जन पाएको झैं गरी) त्यस्ता चलचित्रहरूको बारेमा कुराकानी गर्दा के तपाईंले कुनै विरोध जनाउनुहुन्छ? त्यस्ता कुराहरूप्रति तपाईंको “नकारात्मक” मनोभाव छ भनेर के उनीहरूले देख्छन्? के त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईं दोषी ठहराउनुहुन्छ?
ग्ल्याडिएटर प्रतियोगिताहरू प्रति सुरूका ख्रीष्टियनहरूको कस्तो आचरण थियो? ख्रीष्टियनहरूले आफ्नो बप्तिस्माको समयमा नै त्यस्ता कुराहरूलाई परित्याग गर्दथे। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने, त्यस्ता कुराहरू उनीहरूको बिगतको पापले पू्र्ण जीवनको हिस्सा भए पनि अब उसो उनीहरूले ख्रीष्टमा पाएको नयाँ जीवनको हिस्सा होइनन् भनी स्वीकार गर्दथे। यस्ता रक्ताम्मे खेलहरूमा उपस्थित हुन विश्वाीहरूलाई निषेध गरिएको थियो र जो जान्थ्यो उसलाई मण्डलीले बहिष्कार गर्दथ्यो। टेर्टुलीयनले एक पटक यस्तो भने, “विश्वास र ख्रीष्टिय नियमहरूले संसारको अन्य पापहरूको साथसाथमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको आनन्दहरूलाई पनि इन्कार गर्दछ।” सुरूका शताब्दीका विश्वासीहरू यो जान्दथे कि त्यस्ता कार्यक्रमहरूले रीस, क्रोध र अभिलाषा जस्ता हरेक प्रकारका जङ्ली र अशुद्ध जोशहरू जगाउँछ।
के वर्तमान समयका ख्रीष्टियनहरूले जस्ता कुराहरूको विरोधमा बलियो अडान लिन्छन्? सांसारिक र पापपूर्ण अभ्यासहरू, परमेश्वरको वचनको विरोधमा भएका कुराहरू र परमेश्वरको पुत्रलाई खुशी नतुल्याउने हरेक कुराहरूबाट अलग रहन परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।
ई.पू. ७३ मा स्पार्टाकसको नेतृत्वमा कापूआ अवस्थित ग्ल्याडिएटरहरूको “गोठ” बाट उम्केका ग्ल्याडिएटरहरूको झूण्डसँग इटाली थरथराएको थियो। स्पार्टाकसले दुई वर्षसम्म दक्षिणी इटालीमा कब्जा जमाएर बस्यो। ग्ल्याडिएटर प्रदर्शनहरूलाई प्रेम गर्ने रोमीहरूले जब पूरै देश नै एउटा अखडा बन्यो, तबचाहिँ यो खेल रूचाएनन। उनीहरूले यी प्रतियोगिताहरूलाई तबसम्म मात्र रूचाए जब सम्म उनीहरू आफै त्यस्तो कुरामा संलग्न भएनन् (“मलाई हिंसा गरेको हेर्न मन पर्छ तर मलाई चाहिँ कसैले पनि हिंसा नगरोस् भन्ने कामना गर्छु!”)।
अन्त्यमा, जब स्पार्टाकसलाई पराजित गरियो, उसलाई पछ्याउनेहरूमध्ये छ हजार जनालाई एप्पीयन मार्गमा क्रूसमा टाँगियो। केयौं किलोमिटर सम्म किल्ला ठोकिएका र झुन्ड्याइएका घाइतेहरू थिए।
विश्वासीहरूको विरोधमा रोमी सतावटको विषयमा हामीले पहिल्यै अध्ययन गरिसक्यौं, विशेषगरी उक्त पागल मानिस नेरोको समयमा (पाठ २ मा)। केही ख्रीष्टियन कैदीहरूलाई अखाडामा ल्याएर सिंह र भालुहरूको माझ फ्याँकिन्थ्यो। यहूदीहरू पनि सताइएका थिए। जनरल तीतसले यरूशलेमलाई कब्जा गरेपछि हजारौं यहूदीहरू कैदीहरूलाई रङ्गशालामा मारिनका निम्ति ल्याए (७० ए.डी.)। सुरूका ख्रीष्टियनहरूले त्यस सतावटलाई कसरी व्यवहार गरे?
के उनीहरूले रोमीहरूको विरोधमा लड्न सकौं भनेर मिलेर सिपाहीँको दल बनाए? विश्वासी भएकोले त्यती ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दा के उनीहरू ख्रीष्टिय विश्वासबाट तर्किए? होइन, सुरूका ख्रीष्टियनहरूले उक्त हिंसालाई साहससाथ, घृणालाई विरतासाथ र डरलाई विश्वाससाथ सामना गरे।
त्यस्तो साहस र विरताको एउटा उदाहरण पोलिकार्पको जीवन र मृत्युमा देख्न सकिन्छ। पोलिकार्प त्यही मानिस थिए जसलाई प्रेरित यूहन्नाले व्यक्तिगत रूपमा सिकाएका थिए। पोलिकार्प दोस्रो सताब्दी ए.डी. का मानिस थिए। उनलाई पक्राऊ गरेर स्मर्नाको विशाल एम्फीथिएटरमा ल्याइएको थियो। हजारौं मानिसहरू के होला भनी हेर्न आएका थिए। त्यहाँका शासकले पोलिकार्पलाई तिनको वृद्ध उमेर सम्झना गराउँदै आफ्नो ख्रीष्टिय विश्वासलाई इन्कार गर्न प्रोत्साहन गरे: “ख्रीष्टलाई इन्कार गर, र म तिमीलाई छोडिदिनेछु।” तर पोलिकार्पले जवाफ दिँदै भने, “छयासी वर्ष मैले उहाँको सेवा गरेको छु, र उहाँले मलाई कहिल्यै कुनै खराबी गर्नुभएन; म कसरी उहाँलाई, मेरो राजालाई निन्दा गर्न सक्छु र? म एक ख्रीष्टियन हुँ।”
उक्त शासकले त्यसपछि भीडलाई भन्यो, “पोलिकार्पले आफैंलाई ख्रीष्टियन भनेर स्वीकार गरेको छ।” भीड आफ्नो बुढी औंला तलतिर फर्काउँदै चिच्याउन थाल्यो, “त्यसलाई जलाइदे!” काठहरू जम्मा गरेर चिता बनाइयो। पोलिकार्पले आफूलाई चितामा नबाँध्न आग्रह गरे। “मलाई यतिकै छोडिदिनुहोस्”, तिनले भने। “ज्वालाहरू सहन सामर्थ्य दिनुहुनेले नै मलाई चितामा नबाँधिइकन पनि स्थीर भइ उभिन सामर्थ्य दिनुहुनेछ।” काठको थुप्रोमा आगो जलाइएपछि पोलिकार्पले साहसपूर्वक आफ्ना परमेश्वरलाई अन्तिम प्रार्थना चढाए र अन्त्यमा आगोले तिनलाई निलिदियो। तिनको मृत्यु सन् १५६ मा भएको थियो।
पोलिकार्प जस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति दुखित हुनथाल्नु भन्दा पहिले हामीले यो कुराको सम्झना गर्नुपर्छ कि ती मानिसले सहनु परेको आगो केवल एकैछिनको लागि मात्र थियो। ख्रीष्टलाई इन्कार नगरे पोलिकार्पलाई चितामा जलाउँछौं भन्दै धम्की दिने तिनको शत्रुहरूमध्ये एकजनाले यसो भन्यो, “तैंले तेरो मन बदलिनस् भने म तँलाई आगोले नाश गर्नेछु।” पोलिकार्पले जवाफ दिए, “तपाईंले मलाई त्यो आगोद्वारा धम्की दिँदै हुनुहुन्छ जुन एक घण्टा जल्छ र त्यसपछि निभिहाल्छ; तर तपाईं आउनेवाला इन्साफको आगोको बारेमा अनजान हुनुहुन्छ जुनचाहिँ दुष्टहरूको निम्ति अनन्त दण्डका लागि साँचिएको छ” (हेर्नुहोस् मत्ती २५:४१, ४६)। के पोलिकार्पले बोलेका यी शब्दहरूले वास्तवमा कोचाहिँ साँच्चै दुखित हुनुपर्ने हो भन्ने बुझ्न सहायता गर्छ? पोलिकार्पलाई दोषी ठहराउँदाहुँदी उनीहरूले वास्तवमा आफैंलाई दोषी ठहराइरहेका थिए।
सम्राट मार्कूस औरेलियस (१६१-१८० ए. डी.) को समयमा पनि विश्वासीहरूले ठूलो कष्ट सहनुपर्यो। यस मानिसले ख्रीष्टियनहरूका जायजेथा उनीहरूका अभियोक्ताहरूलाई दिइयोस भनेर उर्दी जारी गर्यो। थुप्रै मानिसहरू ख्रीष्टियनहरूका सम्पत्तिमाथि आफ्नो हात हाल्न कसरी तत्पर थिए भनी तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले हरेक मौकालाई खाली जान दिएनन्। रोमी नागरिकहरू नै भए पनि ती विश्वासीहरूका शिर काटिए। अरूहरूचाहिँ एम्फीथिएटरका अखाडाहरूमा जङ्गली जनावरहरूको मुखमा फालिए।
अविश्वासीहरूले हेर्दाहुँदी उनीहरूले ख्रीष्टियनहरूलाई वयान गरेर नसकिने आनन्द र परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुने साहसका साथ मृत्युको सामना गरिरहेका देखे। मृत्यु हुनेहरूमा अन्तिमचाहिँ ब्लान्डिना थिइन्। तिनले अन्य थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु देखेकी थिइन् र उनीहरूलाई अन्तसम्म नै स्थिर रहन उत्साह र अर्ती दिएकी थिइन्। आफ्नो मुक्तिदातामाथि पूर्ण भरोसा गर्दै तिनी अखाडामा प्रवेश गरिन्। तिनीमाथि जालो फ्याँकियो। त्यसपछि तिनलाई जङ्गली साँढेको आवेगको सामना गर्न छोडियो। साँढेले कैयौं पटक तिनलाई आफ्नो सिङहरूले उचाल्यो र हावामा हुत्त्याइदियो। अन्तिममा तिनको मृत्यु भयो।
ई. सं. २०५ मा अरू विश्वासीहरूलाई अखाडामा मारियो। सेटर, सेटरनिनस र रेभोकाटसहरू अखाडामा प्रवेश गरे र यी तीन विश्वासीहरूलाई जङ्गली पशुहरूको बीचबाट भएर शिकारीहरूको माझमा हतियार पुर्याउन हुकुम गरियो। शिकारीहरू दुई समुहमा थिए र यी तीन जना उनीहरूको बीचमा दगुर्दाहुँदी नर्दयी तरिकाले प्रहार गरिए। फेलिसिटास र पर्पेचुवाहरू पशुकहाँ फ्याँकिए। उक्त पशुले पर्पेचुवालाई पहिलो आक्रमण गरेर उसलाई पछारिदियो; त्यसपछि फेलिसिटासलाई आक्रमण गर्यो र गहिरो चोट पारिदियो; तर उनीहरू मरेनन्, सो काम तरवारधारी सिपाहीले पूरा गरिदियो। रेभोकाटस र सेटरहरू पनि उही शैलीमा मारिए; सेटरनीनसको शिर काटियो; र सेकुन्डूलस कैदखानामा मरे (फक्सेस बूक्स अफ मार्टर)।
अन्य थुप्रै मध्ये यी केवल थोरै उदाहरणहरू मात्र हुन्। यी विश्वासीहरूले ख्रीष्टको निम्ति अडान लिए र उक्त अडानको निम्ति मूल्य चुकाए। परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको खाँचोको समयमा बल, साहस र आनन्द समेत दिनुभयो। तपाईंको जीवन यस्तै अवस्थामा पुगेको भए के हुन्थ्यो? यस्तो विषम परिस्थितीहरूमा पनि तपाईं ख्रीष्टियन भएकोमा गर्व गर्नुहुने थियो? मण्डलीमा उपस्थित हुँदा तपाईंको जीवन नै जोखिममा पर्छ भने, के तपाईं उपस्थित हुनुहुने थियो? मानौं कम्यूनिस्टहरूले हाम्रो देशलाई आफ्नो कब्जामा लिएर ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्ने हरेक व्यक्तिलाई मारिनुपर्छ भनेर हुकुम गर्यो रे। के तपाईं चुपै लाग्नुहुन्छ (मत्ती १०:३२-३३)? के तपाईंले कहिल्यै ख्रीष्टलाई तपाईंको प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ (रोमी १०:९)? विजयी समुहको पक्षमा आउनुहोस्! ख्रीष्टले कहिल्यै हार्नुहुन्न! उहाँ सँधै विजयी हुनुहुन्छ, र मृत्युमा समेत हामीहरू विजेताहरू हौं (१ कोरिन्थी १५:५५-५८)।
यस अध्ययनमालाका अन्य पाठहरू पढ्न चाहनुहुन्छ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/07/1200px-Jean-Léon_Gérôme_-_The_Christian_Martyrs_Last_Prayer_-_Walters_37113.jpg 700 1200 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-07-26 13:18:142020-10-23 16:41:24रङ्गभूमिमा
जीवन गवाही – दिपेन्द्र नेप�... मृतसागरका चर्मपत्रहरू